About Us - Ingubo ye-Ningbo Liyuan Co, Ltd.
I-Ningbo Liyuan Garment Co, Ltd eyasungulwa ngonyaka we-2003, iyingubo ehlanganisiwe ye-OEM & ODM eyenzelwe ngokukhethekile ukukhiqiza ama-T-shirts, iHoodies, nezingubo zefashini. Njengoba sikhule amashumi eminyaka, singumnikazi wendawo engaphezulu kwe-10000 m2 fektri futhi
abasebenzi abangaphezu kwama-200 abanamakhono amahle ngemishini ethuthukile kanye nabaphathi abasebenzayo. Imikhiqizo yethu ithunyelwa ikakhulukazi eYurophu, e-US, e-Australia naseCanada, futhi ophathina bethu ebhizinisini bafaka izinhlobo zemakethe ezinjengeKmart, iWalmart, Izinhlobo zemfashini ezinjengeZara, nemikhiqizo yemfashini yasemgwaqweni, njenge-Staple ne-Essentials.
"Ikhwalithi Okokuqala, Ikhasimende Lokuqala" lihlala lingumgomo wethu wokuqala okufanele ulandelwe ngokuqinile ngaso sonke isikhathi. Njengoba senzile sonke isikhathi, sihlala sifisa ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nensiza enhle kakhulu.
T-shirts enziwe ngezifiso
Kusukela ngo-2019, siqale lolu chungechunge olusha lwensiza kubalingani abaphakathi / abancane. Singanikeza amaphethini wokuqamba noma amakhasimende ethu anganikeza ilogo yawo noma amaphethini. Futhi iqembu lethu lomklami oqeqeshiwe & nabakhiqizi bazoveza izembatho zakho ezenziwe ngezifiso ngesikhathi esifushane.
Isitolo esithengisa online ku-Alibaba & aliexpress
Futhi leli ibhizinisi elisha lokuthengisa eliqaliwe kusuka ngo-2019, kumakhasimende e-inthanethi. sibuye sisungule iqembu futhi silungiselela ama-T-shirts, ama-hoodies, kanye nosayizi wokugqoka oyowenza okuthengiswa kuwebhusayithi yezitolo ethengisa izinto zonke e-Ali-Express.
Ibhizinisi le-OEM yendabuko
Ibhizinisi lethu eliqiniseka kakhulu selokhu sasungulwa ngonyaka we-2003. Ngemuva kwamashumi eminyaka wokukhula, sakha abalingani abaningi abathembekile bebhizinisi elide. Ukuhlangabezana nezidingo ezihlukile, sinezimboni ezi-2 ezisuselwa kwi-Ningbo China naseYangon Myanmar.
Ifektri-1 (Ningbo, China):
Njengoba sikhule amashumi eminyaka, sesisungule intambo yezimboni evuthiwe neyokwehla kwezimboni kanye nabalingani eNinbo, okusenza sithembele ukuphatha ama-oda ngezidingo ezahlukahlukene, njengezindwangu ezingejwayelekile noma imidwebo eyinkimbinkimbi. Ngakho-ke efektri ye-Ningbo, singaphatha ama-oda engubo ngendwangu engajwayelekile noma i-oda eliphuthumayo.
Ifektri-2 (iYangon, neMyanmar):
Ngokukhula kwebhizinisi, sihlala sifuna indlela yokwehlisa izindleko zamakhasimende ethu, Ngakho-ke siqala ukutshala imboni yaseMyanmar kusuka ngonyaka we-2018 ngemali ephansi. Manje leyo fektri igxile kakhulu ekuhlelekeni okukhulu ngendwangu ejwayelekile nezidingo ezilula zokuthunga.